Jomo နည်းပညာ Co. , Ltd မှ - Koowheel စမတ် Scooter သင်၏နှလုံး, သင့် traffic ကိုဖြေရှင်းချက်လွတ်မြောက်
Koowheel စမတ် Scooter သင်၏နှလုံး, သင့် traffic ကိုဖြေရှင်းချက်လွတ်မြောက်
စိတ်ကူးအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါတယ်ဘယျအခြိနျ, ကောင်းသော, သို့သော်အကောင်အထည်ဖော်မရနိုငျပေမဲ့အဆိုပါကစားသမားတစ်ဦးသဟဇာတအသွားအလာဖန်တီးခေတ်သစ်အသွားအလာပြဿနာများအတွက်ဆန်းသစ်နှင့်လက်တွေ့ဖြေရှင်းချက်ပေးရန်, ဆန်းသစ်တဲ့နည်းပညာများနှင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်၏နည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်နေဆဲမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါယာဉ်ကြောပြဿနာကိုယာယီလမ်းလျှောက်ပိုပြီးအဆင်ပြေအသွားအလာမော်တော်ယာဉ်ကိုရှေးခယျြ, ဖြေရှင်းမရနိုင်သည့်အခါ Koowheel လျှပ်စစ်ချိန်ခွင်လျှာ Scooter give youafreely travel, to solve traffic problems for you.
Koowheel has been committed to green vehicles, Koowheel electric balance board စူပါမသာ, ခရီးဆောင်အလုပ်သို့မဟုတ်ကျောင်းများအတွက်ရေတိုအကွာအဝေးခရီးသွားလာမှုအတွက်သင့်လျော်သော, ဒါပေမယ့်လည်းနေ့စဉ်အပန်းဖြေဖျော်ဖြေရေး, ဗေဒလေထု, functional ဖြစ်စေမတူကွဲပြားမှုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အသိဉာဏ်အေးမြစတိုင်လေထု, အစိမ်းကာဗွန်, တစ်ခေတ်သစ်များအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ် လူငယ်များခရီးသွား၏ဆိုလိုသည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမြို့ပြလူဦးရေများအတွက်ရှည်လျားပူပဖြစ်ပါတယ်။ Koowheel လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ် သင်တို့နှင့်အတူအသေးငယ်တဲ့အသံအတိုးအကျယ်နဲ့အလင်းအလေးချိန်အားပါဝါ, သည်းခံခြင်းနှင့်ခိုင်ခံ့သောအတူအလွယ်တကူလွန်းအဆောက်အ, ထို့နောက်မရှိတော့အသွားအလာပြဿနာဘာသာရပ်, လွတ်လပ်စွာအခမဲ့နှလုံးခရီးသွားလာ။
Modern technology is the rapid development of the times, science and technology for the benefit of people, science and technology to promote social development,agood design program may be able to reduce traffic pressure, but this need to wait until the program is truly implemented. Koowheel electric car balance intelligent cool, green and low carbon, to provide you with the most comfortable way to travel, Koowheel လျှပ်စစ်ချိန်ခွင်လျှာ Scooter on the road, you are the star.